Waa maxay farqiga u dhexeeya saadaasha hawada iyo cilmiga cimilada? | Saadaasha Shabakadda
Waxaa jira jahwareer badan oo ku saabsan waxa saadaasha hawada iyo maxay tahay cimilada. In kasta oo labada cilmiba ay u heellan yihiin daawashada cirka, haddana mid kastaa wuxuu u sameeyaa ujeeddo kale.
Sidaa darteed, haddii aad shaki ka qabtid mawduucan, markaa waan sharxi doonaa waa maxay farqiga u dhexeeya saadaasha hawada iyo cimilada si markaa, laga bilaabo hadda, aad u adeegsan karto ereyada si sax ah.
1 Waa maxay saadaasha hawadu?
2 Waa maxay cimilada cimilada?
Waa maxay saadaasha hawadu?
Saadaasha hawadu waa sayniska oo daraaseeya isbadalada ku dhaca jawiga si isdaba joog ah. Si tan loo sameeyo, waxay isticmaashaa cabbiraadaha sida heerkulka hawada, cadaadiska Hawada, huurka, dabaysha ama roobka, iyo kuwo kale. Sidan oo kale, waxay badanaa saadaalin karaan cimilada la qaban doono mudo ah 24 ilaa 48 saacadood, iyo waliba sidoo kale muddada dhexe.
Aad ayey waxtar u leedahay in la ogaado, maxaa yeelay waxay u adeegtaa hage ahaan beeralayda, laakiin sidoo kale shirkadaha diyaaradaha, dhakhaatiirta, iyo dhab ahaan, qof walba maxaa yeelay waxay kuxirantahay cimilada, labiskeenu wuu ka duwanaan doonaa.
Waa maxay cimilada cimilada?
Cimilada ayaa ah sayniska oo daraasad ku sameeya cimilada iyo kala duwanaanshaheeda waqtiga. Waxay u adeegsanaysaa cabirro isku mid ah sida saadaasha hawada, laakiin ujeedadeedu tahay barashada astaamaha cimilada muddada-dheer. Thanks to xogta iyo macluumaadka la helay, maanta waxaan dhihi karnaa meeraha Earth wuxuu leeyahay cimilo kala duwan: tropical, xanaaqsan, dabayl, badweynta, continental, iwm mid waliba astaamo u gaar ah. Marka, tusaale ahaan, inta lagu jiro cimilada kuleylka celcelis ahaan heerkulku waa 18ºC, cimilada cirifka celcelis ahaan qiyaastii waa 0 digrii.
Waxaas oo dhan, saynisyahannadu waxay darsaan oo ay falanqeeyaan xogta la helay sannadihii la soo dhaafay, iyo kuwa dayax-gacmeedyadu si joogto ah u duubaan.
Miyey faa'iido kuu lahayd? Ma ogeyd farqiga u dhexeeya saadaasha hawada iyo cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Waa maxay farqiga u dhexeeya saadaasha hawada iyo cilmiga cimilada?